Mafana ny IP: Manamboara ny lazanao vaovao miaraka amin'ity fampiharana IP Warming ity | Martech Zone
Raha manana base mpamorona habe manan-danja ianao ary voatery nifindra tany amin'ny mpamatsy serivisy mailaka vaovao (ESP), mety efa nandalo fanaintainana ianao tamin'ny famongorana ny laza vaovao. Na ny ratsy kokoa… tsy niomana ho amin'izany ianao ary sendra olana tamin'ny iray amin'ireo olana vitsivitsy:
Ilay mpamatsy tolotra mailaka vaovao dia nahazo fitarainana ary nanakana anao tsy handefa mailaka fanampiny mandra-pandaminanao ny olana.
Ny Mpamatsy Serivisy amin'ny Internet na serivisy fanaraha-maso laza dia tsy mahalala ny adiresy IP anao ary manakana ny fampielezan-kevitrao betsaka.
Ny mpamatsy tolotra Internet dia tsy manana laza noho ny adiresy IP anao ary mandeha ny mailaka rehetra mankany amin'ny folder junk.
Manomboka amin'ny tongotra ankavanana miaraka amin'ny Fanafanana ny IP kritika ny paikady rehefa mifindra any amin'ny mpanome tolotra mailaka vaovao. Ny ankamaroan'ny mpanome tolotra mailaka dia tsy manao raharaha be loatra momba izany… mampatsiahy anao fotsiny izy ireo mba hanafana ny adiresy IP anao vaovao. Ho an'ny vokatra tsara kokoa, na izany aza, tsy asa tsotra izany:
Tsy te handray risika amin'ny fandefasana voalohany ianao, noho izany dia mizarazara ny mpanjifanao ho an'ny mpikirakira anao izay tena miasa. Raha tsy nisy olona nanokatra na nanindry ny mailaka tao anatin'ny volana maro… dia mety tsy tianao ny hampiditra azy ireo amin'ny fampielezana IP Warming anao.
Saika ny adiresy mpamandrika rehetra dia misy adiresy mailaka ratsy ary adiresy mailaka fandrika spam izay mbola tsy nesoriny na nodioviny mihitsy. Alohan'ny handefasana fampielezan-kevitra IP Warming, te-hamafa ireo adiresy mailaka ireo ianao avy amin'ny angona data.
Isaky ny ISP dia manana adiresy mailaka voatsara indrindra hanombohana hananganana ny lazany rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'izy ireo. Ohatra, Google dia maniry ny handefasanao vola kely amin'ny voalohany, avy eo hitombo ny vola rehefa mandeha ny fotoana. Vokatr'izany dia mila mizara tsara sy mandrindra ny fampielezan-kevitrao ianao.
Mafana ny IP
Rehefa avy namolavola sy namolavola paikady mahavariana IP Warming ho an'ny mpanjifa an-jatony, izaho sy ireo mpiara-miasa amiko Highbridge nanapa-kevitra ny hampivelatra ny serivisinay manokana mandritra ny taona lasa mba hanamorana ny fomba. Anisan'ny mampiavaka ny IP Warm ny:
fanadiovana - Fanadiovana mialoha ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa mba hampihenana ny fipoahana, ny adiresy mailaka vonjimaika ary ny fandrika spam. Izahay dia manakana ireo firaketana ireo amin'ny fampielezan-kevitra novolavolaina ary averinay aminao ny angon-drakitra mba hanavaozana ireo rakitrao loharano.
Prioritization - Ataonay laharam-pahamehana ireo mpamandrika mifototra amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny orinasa mba hahazoana antoka fa ny mpikirakira mavitrika indrindra dia alefa voalohany amin'ny fampielezana IP Warming.
Domain Intelligence - Ny ankamaroan'ny tolo-kevitry ny IP Warming dia milaza aminao fotsiny ny hamaritana ny mailaka ataonao amin'ny alàlan'ny ISP; na izany aza, tsy tsotra toy ny mijery ny fonenan'ny adiresy mailaka io. Tena mamaha ilay sehatra izahay ary manana faharanitan-tsaina amin'izay serivisy ampiasain'izy ireo hanatsarana ny fanentanana. Manakiana izany amin'ireo orinasa B2B izay mandefa any amin'ny sehatra fandraharahana fa tsy mailaka mahazatra an'ny mpanjifa.
fandaharam-potoana - Averinay any aminao ny lisitr'ireo fampielezan-kevitra sy ny fandaharam-potoana fandefasana soso-kevitra aminao mba hahafahanao manafatra mora foana ireo lisitra ary mandahatra ireo fandefasana. Ny sisa ataonao dia ny famolavolana ny fampielezan-kevitra sy ny fandaharam-potoana fandefasana!
Mivezivezy any amin'ny adiresy IP zaraina miaraka amin'ny ESP vaovao ve ianao?
Na dia mpivarotra mailaka kely kokoa aza ianao mifindra amin'ny adiresy IP zaraina miaraka amin'ny Mpamatsy Serivisy mailaka vaovao, ny fanadiovana sy ny fanomanana fampielezan-kevitra ataonay ho anao dia hiaro anao amin'ny olana.
Tondro zotra IP mafana
Izahay dia miezaka manatsara ny lampihazo miaraka amin'ireo mpampitohy data ary misy aza ny fandefasana fandaharana amin'ny alàlan'ny API ka hanao kely aza ny orinasa. Amin'izao fotoana izao, serivisy farany izy io - saingy miasa tsy an-kijanona eo amin'ny lafiny farany sy ireo fanatsarana ireo izahay.
Raha miomana ny hifindra any amin'ny mpamatsy serivisy mailaka vaovao ianao dia fotoana tsara indrindra hampiasana ny sehatra satria manohana bebe kokoa sy miasa tanana amin'ireo mpanjifantsika izahay!
Manomboha amin'ny IP Warm
Fanambarana: mpiara-miasa amiko aho Mafana ny IP.
Tags: natokana ipmailaka mailakalazan'ny mailakampamatsy tolotra mailakaESPip lazaip mafanafampiharana fanafoanana ipserivisy fanafoanana ipip nizara